Saxiix, ugu dambeyntiina iyada oo aan lahayn xargaha Google | Laga soo bilaabo Linux
Babel | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
signal isticmaalaa Fariin daruur Firebase (horey Google Cloud Message ama GCM) taas oo, sida aad u maleyneyso, waxay kuxirantahay Google. Waxaa loo maleynayaa in Google kaliya ay bixiso oo ay hesho xogta oo aysan aqrin karin (taas oo aan ka dhaafi karin inay heystaan ​​diiwaanka cidda ay la hadlayaan), laakiin xitaa sidaas oo kale, adeegsiga Calaamaddu waxay muujineysaa in taleefan lala yeesho Google oo ku dhegan caloosha, taas oo u baahan nooc kale nuglaanta u nuglaanshaha asturnaanta ... ama ugu yaraan waxay ahayd illaa hadda. Keydso taariikhdan sidii maalintii Signal ay noqotay barnaamijka fariimaha gaarka loo leeyahay ee ugu wanaagsan.
1 Saxeex ku samee WebSocket halkii aad ka isticmaali lahayd GCM
2 Saxeex on PC
3 Dheeraad ah Vivaldi
Saxeex ku samee WebSocket halkii aad ka isticmaali lahayd GCM
Sida ay dhammaan kuwa ku howlan dagaalka u gaarka ah ay ogyihiin, signal Waa codsi aad u wanaagsan oo sirta farriimaheena dhibic ilaa dhibic; xitaa Snowden - waa midka indhaha u furay dunida oo dhan isaga oo ka warbixinaya basaasida tirada badan ee ay wadaan shirkadaha iyo dowladaha - u isticmaalaa maalin kasta, laakiin Signal wuxuu lahaa dhibaato taas oo ka dhigtay mid aan dad badani ka faa'iideysan karin: waxay u adeegsatay Firebase Cloud Messaging (ama GCM magaceedii hore: Google Cloud Message). Tani waxay is bedeshay markii Moxie Marlinspike xayeysiis 20-ka Febraayo, Calaamaddu uma baahna inay adeegsato Google si ay u maamusho farriimaha nooca 3.30 (oo hadda ku jira beta oo aan waqti dheer ku qaadanaynin soo degitaanka nooca deggan), taas oo war wanaagsan u ah dhammaan kuwa Waxaan isticmaalnaa taleefanka gacanta oo aan laheyn isha Google ee marwalba taagan.
Iyo sidee bay uga sii gudbi doonaan gudbinta ogeysiisyada riix iyo maaraynta farriimaha? cunt WebSockets, “Teknolojiyad bixisa kanaal isgaarsiineed oo laba dhinac ah iyo dabaq buuxa in ka badan hal saldhig oo TCP ah ». Ereyada fudud, dalabku wuxuu awoodi doonaa inuu ogaado haddii uu leeyahay Adeegyada Google Play. Hadday sidaas tahay, waxay isticmaali doontaa GCM; haddii kale, WebSocket.
Warka kale ee cajiibka ah ayaa ah, maadaama aysan mar dambe daruuri u noqon doonin isticmaalka Google, waxaa jira qorshayaal muddo-gaaban ah oo lagu dhejinayo Signal dukaamada software-ka ee bilaashka ah sida F-Droid, ama si rasmi ah ama loo maro keydadka.
Saxeex on PC
Qodob kale oo adag oo lagu wareegi karo waa iyadoo la adeegsanayo Signal kombuyuutarka ku yaal. Sida kaliya ee lagu sameyn karo waxay ahaan jirtay iyada oo loo marayo Google Chrome ama ugu fiican Chromium (Beddelka il furan ee Chrome). Dhibaatadu waxay ahayd, markale, waxay ahayd lagama maarmaan in la isticmaalo server-yada Google maaddaama daalacashadayaashu ay ku xirmaan koontadaada si ay wax walba isugu waafajiyaan.
Waxa kale oo jira ikhtiyaar loo adeegsado biraawsarka Vivaldi taas oo, maadaama ay ku saleysan tahay Chrome, isticmaasho isla fiditaanno iyo fiilooyin isku mid ah. Haddii aad ku jirto Debian ama derivatives (Ubuntu, hoose, iwm), waa inaad kaliya ka soo dejiso faylka .deb Halkan oo qor: sudo dpkg -i Descargas/vivaldi-stable1.7.735.46-1amd64.deb ; sudo apt-get -f install. Ogeysiis kadib halbeegga -i waa wadada halka feylka .deb laga soo dejistay (badiyaa galka Downloads ee galka gurigaaga). Markaad rakibto Vivaldi tag https://chrome.google.com/webstore/detail/signal-private-messenger/bikioccmkafdpakkkcpdbppfkghcmihk oo ku rakib barnaamijka 'Signal web app' si aad telefoon ugula jaanqaadi karto kombiyuutarka.
Xaalada Fedora, wali waxaad ubaahantahay inaad soo dejiso rpm faylka oo qor sudo rpm -ivh Descargas/vivaldi-stable1.7.735.46-1amd64.deb. Si la mid ah tusaalaha kore, iska hubi inaad dejiso dariiqa saxda ah kadib -ivh.
Haddii aad isticmaaleyso Arch ama waxyaabo kale (Antergos, Manjaro, iwm.), Wax walboo way fudud yihiin. Kaliya qor yaourt -S vivaldi waana taas
Nidaamyada furfuran ee furan Lacag kama helo xayeysiinta ama iibinta xogta isticmaaleyaashiisa, marka haddii aad isticmaasho Signal oo aad wax ku deeqi karto, waa kan boggiisa deeqaha.
Dheeraad ah Vivaldi
Vivaldi waa biraawsar uu abuuray agaasimihii hore ee Opera isaga oo isku dayaya inuu dib ugu laabto dhabbihii, sida uu sheegay, Opera ayaa lumiyay. Wali waa shaqo socota, markaa waxyaabaha qaarkood uma shaqeeyaan sidii la rabay, laakiin wax walbo waad sameyn kartaa. Waxa ugu xanaaqa badan isticmaalkiisa guud ee GNU / Linux waa awood la'aanta inuu ciyaaro fiidiyowyo, laakiin waa wax si fudud loo xallin karo. Taas awgeed waxaan u baahanahay xirmada chromium-codecs-ffmpeg-extra ama libavcodec-extra57 ee Debian (sudo apt install chromium-codecs-ffmpeg-extra o sudo apt install libavcodec-extra57), oo ay ku jiraan ffmpeg codecs si loogu ciyaaro wax kasta oo ku jira shabakadda. Haddii aad rabto inaad sii fogaato oo aad sidoo kale ciyaarto waxyaabaha DRM-ka ilaaliya (sida Netflix), taasi waa xoogaa dhib badan laakiin macquul maahan. Taas waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo qoraalkan oo socodsiiya. Si taas loo sameeyo, nuqul nuxurka qoraalka, fur tifaftiraha qoraalka, ku dhaji nuxurka kuna keydi feylka sida ugu dhow- widevine.sh (ku keydi galka gurigaaga ama ku beddel amarrada soo socda dariiqa halka qoraalku ku yaal). Ka dib amarradan amarrada ah:
sudo chmod 764 latest-widevine.sh (tani waxay siineysaa rukhsadaha lagu socodsiinayo qoraalka)
sudo ./latest-widevine.sh (socodsiinta qoraalka ku jira)
Qoraalku asal ahaan wuxuu rakibaa Chrome, wuxuu ku xiraa libwidevinecdm.so (maktabadda loo baahan yahay ee Netflix) Vivaldi, ugu dambeyntiina waa laga saarayaa Chrome.
Marka laga hadlayo Arch iyo derivies, sida had iyo jeer, wax walba way ka sahlan yihiin. Kaliya qor yaourt -S vivaldi-ffmpeg-codecs vivaldi-widevine iyo voila, waxaad yeelan doontaa koodhadh fiidiyoow ah oo ay ku jiraan midka lagama maarmaanka u ah daawashada Netflix.
Marka taas la sameeyo waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato daawashada taxane ama filim ku saabsan Netflix intaad kula xiriirayso Signal xiriiradaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Saxiix, ugu dambeyn bilaa xariga Google
Dhibaatadu wali sidii ayey tahay ilaa aynaan ahayn kuwa adeegsada oo horumarsan oo aan ku xidid nahay kombuyuutarkeena (iyo gaar ahaan haddii aan beddelno ROM).
Wixii isticmaale caadi ah waxyaabaha waxay la mid noqon doonaan had iyo jeer. Telegram waxay bixisaa ikhtiyaarka ah in aan la adeegsan Adeegyada Ciyaarta.
Dabcan, qodobkan waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha horumarsan oo, badanaa, aan rabin inay kuhelaan Adeegyada Google Play taleefankooda. Haddii isticmaaluhu aanu farsamo ahayn, hubaal wuu ku faraxsanaan doonaa whatsapp waana intaas.
Xagga Telegram, aad ayaan u jecelahay runtiina maalin walbo waan istcimaalaa, laakiin asturnaanta ma fiicna maxaa yeelay wax kama qarinayso asal ahaan Qarsoodi sidoo kale macquul maahan kooxo ahaan.
Goor dambe. Waxaan u maleynayaa in xilligii Calaamadda ee dhagaystayaal badan ay dhaaftay Telegram-na ay qabsatay booskii ay ahayd in Calaamaddu qabsato bilawgiiba maxaa yeelay way ka ammaan badan tahay marka loo eego Telegram, oo aan adeegsan e2e encryption aan ka ahayn sheekaysiga qarsoodiga ah.
Hadda dadka doonayay farriin kale oo loo beddelo Wasa waxay horey u isticmaaleen Telegram, iyo Signal lama tartami karaan kumanaanta waxqabadka ee TG (kanaalada, booska, istiikarada, Telegra.ph, iyo kuwa soo socda).
Nasiib darro, maxaa yeelay diidmada Duroc inay daabacdo koodhadhka adeegeyaashooda iyo inay daabacdo lambarka barnaamijka moobiilka isla markaa ay ku daabacaan apk-ga 'Gplay' waxay u rogtay software-gaar ah oo 3 ama 4 bilood kasta ay furan tahay isha, illaa nooca nambarkooda ay daabacaan uu mar labaad duugoobo oo cid aan iyaga ahayn aysan garaneyn lambarka isha. Laakiin waa in xitaa haddii Signal uu lahaa waxqabadka TG, dadku mar dambe ma beddelayaan; mar waa caadi, laga bilaabo WA ilaa TG, laakiin maahan laba jeer.
Sikastaba, uguyaraan kuwa aad uga walaacsan asturnaantooda wali waa war aad u wanaagsan oo ay ku isticmaali karaan Signaal aaladooda Google.free, xitaa hadii ay yihiin koox aad u tiro yar. Bishaaro wanaagsan, xaalad kastoo jirta.
Ku jawaab Arcadio
uma shaqeeyo lubuntu 16
komorebi: Maareeyaha gidaarka sawir gacmeed qurux badan oo la hagaajin karo